नापी कार्यालय इलाममा अमिनको काम कार्यालय सहयोगीले गर्न थालेपछि…. – abcnepali
नापी कार्यालय इलाममा अमिनको काम कार्यालय सहयोगीले गर्न थालेपछि….
2 months ago Tuesday, July 23, 2019abcnepali
अमिन र सर्वेक्षकको काम कार्यालय सहयोगीले गर्छन् भन्दा पत्याउन गाहे होला । तर नापी कार्यालय इलामका कार्यालय सहयोगी देव तिखत्रीले अमिन सर्वेक्षकको काम गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
कार्यालय सहयोगी तिखत्रीले भर्खरै इलाम नगरपालिका ९ गोलाखर्कका प्रेम चौहान र नेत्रकला अधिकारी चौहानको जग्गा नाप्न गएका थिए ।
उनले छ आना भनेर नापिएको जग्गा पछि साढे पाँच आना मात्र पुष्टि भएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । प्रेम र नेत्रकलाले एक स्थानिय छत्रकुमारी कट्टेललाई जग्गा विक्रि गर्नका लागि मालपोत कार्यालय आउँदा सो कुरा खुलेका हो । कार्यालयमा आउँदा आफैँ अमिन भन्दै तिखत्रीले नाप्न आउने भनेको र नाप्न गएको पिडित नेत्रकलाले वताइन् ।
जग्गा खरिदकर्ता कट्टेलले नाप्नमा गल्ति भएका कारण मालपोतबाट काम हुन नसकेको वताइन् । उनले नाप्नमा गल्ति भएकै कारण आफुहरुले झन्झट ब्यहोर्नु परेको वताइन् ।
कार्यालय सहयोगी देव तिखत्रीले सुरुमा अमिन पढ्नै नपर्ने ब्यवहारिक ज्ञानले नै काम चलाउने गरेको वताए । पछि आफुले गल्ति गरेको स्वीकारे तर आफुले अमिनको काम भने नगरेको वताए । उनले उल्टै तपाइँ आफैँ पनि नाप्न सक्नुहुन्छ नि भनेर हामीलाई सिकाए ।
अर्को अनौठो कुरा त जग्गावालाले कार्यालयमा आएर निवेदन दिनुपर्ने त्यसपछि मात्र कार्यालयले तेकोको राजश्व जम्मा गरिसकेपछि मात्र नाप्नका लागि अमिन पठाउने भए पनि कार्यालयमा बुझ्नका लागि आएका सेवाग्राहीलाई आफैँ नाप्न आउने वताए ।
अमिनले जमिनवालाको जग्गा नापेबापतको रकम राजश्वमा जम्मा हुन्छ । उनले चौहान परिवारबाटबाट बिना विल ४ हजार लिएको उनीहरु वताउँछन् । त्यो पैसा कुन राजश्वमा जम्मा भयो । हाल इलाम नगरपालिका ९ गोलाखर्क साविक इलाम नगरपालिका भित्रै पर्दछ । त्यहाँ अमिनले नापेवापत ९ सय १६ रुपया लिन पाइन्छ । तर कार्यालय सहयोगी तिखत्रीले भने ४ हजार रकम लिएका छन् ।
यता नापी कार्यालय इलामका प्रमुख सुमन बिक्रम पन्तले भने यो सरासर गल्ति भएको स्विकारे । तर कार्यालयमा विना जानकारी उनले सो काम गरेको उनको भनाई छ ।
यसरी कार्यालय सहयोगीले नै अमिनको काम गर्न थालेपछि अमिन विषय खर्च गरि गरि किन पढ्ने ? अनी जान्दै नजानेको मान्छेले यस्तो काम गरेर सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ । यसको क्षतिपुर्ती कसले दिने ? यो सानो गल्ति हुँदै हैन । यस्तो प्रबृति बढ्दै गयो भने सामान्य मानिसलाई मात्र हैन नेपाल सरकारलाई पनि राजश्व जम्मा पैसा जम्मा नहुँदा सिंगो देशलाई नै घाटा हुन्छ । यस तर्फ कसको ध्यान जाने ? उनले हाकाहाकी ठगी समेत गरेका छन् । ९ सय १६ रुपयाँ पर्ने कामलाई ४ हजार लिनु सरासर ठगी गरेका छन् । ०६४ साल पुष १ गतेदेखी लागु भएको राजश्व ऐले पनि उही भएको कार्यालय प्रमुख पन्त वताउँछन् ।
जग्गा नापे वापत कार्यालयले ठाउँ र दुरी अनुसार राजश्व असुल्ने प्रावधान छ । तर उनले आफुखुसी पैसा असुलेका छन् । यस्तो प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न सम्वन्धित निकायको ध्यान नगए यसरी सरकारी कर्मचारीले ठग्ने प्रबृत्ति वढ्दै जान सक्छ ।
हिलिहाङमा हत्या गरिएकी माइजोगमाईकी सुजताको परिवारलाई नौ लाख रुपैँया हस्तान्तरण
दमकमा युवाविच ग्याङ फाईट : धारीलो हतियार प्रहारबाट एकजनाको मृत्यु ,दुईजना घाईते
पाँचथर हत्या प्रकरण : ज्वाइँको शव नजिकै हत्यामा प्रयोग गरिएको खुकुरी भेटियो
पाँचथरमा महत्वका तीन सडक निर्माण सुरु
माईजोगमाईको नयाँवजारमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रोड रन